Izibhambathiso Zomtshato 10 Eziya Kukhokelela Iintanda Zakho Ukulila
Izibhambathiso zomtshato: Ngaba Ziyimikhosi okanye Ngaba Ziyabonakala Kakhulu?
Umthendeleko womtshato uyinto elandelayo: umkhosi, ukuba uyayibheka kwimiba enengqiqo. Nangona kunjalo, ukuba ufanele uqwalasele abantu ababini abanomtsalane ngokwemvakalelo komnye nomnye, isifungo somtshato sisithembiso somlomo sokuxhasa konke okuthathwa njengingcwele kumtshato. Ukutshintshisiswa kwezibhambathiso, nangona kunjalo nje iqela lamagama, linomsebenzi obaluleke xa umtshakazi nomyeni bethetha ngamazwi ngenjongo epheleleyo nangokholo oluhle.
Ngaba Izibhambathiso Zesiqhelo Zingcono okanye Izibhambathiso Zakho?
Izibhambathiso zesintu zizonke. Isibhambathiso somdabu ngokuqhelekileyo njengomtshato wamaKatolika uza kuba: "Mina, (igama lakho), ndithatha, (igama lomlingane), kumfazi wam / umyeni wam mthethweni, ukuba ube kunye nokubamba ukususela namhlanje, ezibi, kuba zihlwempu, zihlwempuzekile, zigule kunye nempilo, de kube sekufeni siyahlukana. "
Nangona kunjalo, kukho ukunyuka okwenzekayo phakathi kwabantu abakhetha ukuzenza izithembiso zabo kunokuba babambelele kwisifungo somdabu. Xa ubhala isifungo sakho, unenkululeko yokudala ukufaka ezinye zeenkcukacha zakho zobuqu, i-dash of humor, i-anecdote echaphazelayo, okanye isithembiso esikhethekileyo esenza sakho isifungo. Kodwa ukubhala sakho isibhambathiso akukho ikhekhe. Abaninzi abatshaba kunye namagumbi bakuthola kunzima ukubhala imigca embalwa eya kubakhombisa ngonaphakade.
Ukuba ubhala izibhambathiso zakho, zizinto ezimbalwa ukugcina engqondweni ukwenza izibhambathiso zomtshato wakho zihle:
1. Gcina Lulula kwaye Lihle
Amagama athambileyo aya kuba nenjongo ukuba uthethe ukuba uthetha ukuthini. Xa uqhubeka ulula, uvumela iqabane lakho ukuba lijonge ubunzulu bamagama akho.
2. Yithetha Oko Kuthethayo, Thetha Oko Utshoyo
Ndicinga ukuba akunakuthi ukuba izibhambathiso zomtshato zakho zivakalisa uthando lwakho nokuzinikela.
Ukuba uthembekile kwaye uyinyanisekileyo kwizibhambathiso zakho, uya kufumana ubomi bakho obusetyhini obulula ukujongana nayo.
3. Gxininisa kwiNkcazo kunokuba ufake umfanekiso omkhulu
Qinisekisa ukuba ufake iinkcukacha ezithile ezenza ukuba ziyingqayizivele kumtshato wakho. Nangona akusiyo ingcamango efanelekileyo yokwenza intetho ende ende (khumbula, akusiyo umthendeleko wokwamkelwa komklomelo), vumela izibhambathiso zomtshato zakho zibonise iinkolelo zakho, amaphupha akho kunye nezoqabane lakho.
4. Hlanganisa iHumor ukuba Kufuneka, Kodwa Musa ukuMisa iComedy
Ukuzihlaziya kufuneka kube yinto enomdla okwenzela ukusifakela isibhambathiso sakho. Makubeki ngaphezu kobukhulu okanye ubunzulu besithembiso sakho. Ingqwalaselo yesibhambathiso sakho kufuneka ibe yothando lwakho nokuzibophelela kwakho.
5. Izibhambathiso Zakho Zomtshato Azinakwenzeka Ukuba Zibukele Uluntu
Nangona uza kuthetha izithembiso zakho ebusweni bakho nabathandekayo, akudingeki ubhale izibhambathiso zakho ukukholisa abaphulaphuli. Nguwo umtshato wakho, kwaye nguwe kuphela omele ukhethe isigqibo sokungena kwizibhambathiso zakho. Ungazami ukuyenza ibonwabisa okanye inomdla kubaphulaphuli bakho. Balapha nje ukuba bazinge baze bawubusise umtshato wakho. Gcina izibhambathiso zakho ngokunyanisekileyo, ngokuchanekileyo, nangomntu.
Ukuba ufumana ulwabalazela amagama afanelekileyo, ungasebenzisa ezinye zezicatshulwa ukukunceda wenze isithembiso esikhulu somtshato.
Ezi zicatshulwa ziya kwandisa umbala webala kwizithembiso zakho.
UWilliam Butler Yeats , Uyaziqonda iingubo zezulu
Ndisasaze amaphupha am phantsi kweenyawo zakho; Yinyathela ngokukhawuleza kuba uhamba ngamaphupha am.
Ndikhule kunye nam! Eyona nto ibhetele ayikho.
Ndiyakuthanda , kungekhona oko ukhona, kodwa oko ndikhoyo xa ndikunye.
Ndifana neenkwenkwezi eweleyo ekugqibeleni ifumene indawo yayo ngaphaya komnye kwinqanaba elincomekayo, apho siya kukhanya khona emazulwini ngonaphakade.
Ndiyakuthanda, ndiyamthanda wena kuphela
Ngothando olungayi kufa
Kuze kube ilanga libandayo
Yaye iinkwenkwezi zikhula ...
Ubiza ngokuba ngumhlanya, kodwa ndibiza ngokuba ngumthando.
Ukuba ndiyazi ukuba yintoni uthando , kungenxa yenu.
UJean Baptiste uHenry Lacordaire
Singamaqabunga kwelinye isebe, amaconsi olwandle olunye, iintyatyambo zomyezo omnye.
Lo uyintanda yam kwaye lo ngumhlobo wam.
Awunanto imfutshane yam yonke into.
Iingcaphuno ezingama-20 ezikunceda ukuba ubone ama-Signtale Signs of Falling in Love
Iingcaphuzo Eziqabulayo Xa Ulahlekelwa Ngomnye
Ukucwangcisa phambili kunye noChaining Backwards